Dawladda maxay ka qabaneysaa nooc cusub oo amni daro ah oo kusoo kordhay Muqdisho? - BBC News Somali
Image caption Khaasim Axmed Rooble, afhayeenka Booliiska
Magaalada Muqdisho waxaay muddo dheer caan ku ahayd arrimaha amni darada, gaar ahaan kuwa lala xiriiriyo kooxaha dowladda kasoo horjeedda ee geysta falalka argagixisada, hase yeeshee waxaa hadda soo kordhay nooc cusub oo amni daro ah oo ay dadka muddo ka reysteen.
Afhayeenka booliiska Soomaaliya Khaasim Axmed Rooble oo ay BBC-da wax ka weydiisay hawlgalka ayaa yiri "Qof kasta oo qori ama bastoolad laso gala magaalada sidaas ayaa talaabo looga qaadayaa".
Noocani waa falalka dambiyada, kuwaas oo rag hubeysan ay dhac ka geystaan suuqyada magaalada, gaar ahaan suuqa bakaaraha.
Uma badna kooxahan in ay dad dilaan, balse waxa geystaan dhac hantiyeed, haye yeeshee ciidanka booliiska oo aad u tiro badan ayaa lagu daadiyay qeybaha kala duwan ee magaalada si ay oga hortagaan kooxahan sida uu kusoo waramayo wariyaha BBC-da ee Muqdisho.
Booliiska oo toogasho sameeyay
Maanta ayaa ugu dambeysay markii rag hubeysan ay isku dayeen in ay dhac ka geystaan suuqa weyn ee Bakaaraha, goortaas oo ciidanka booliiska ay toogasho ku dhaawaceen labadii nin ee falka burcadnimada ah isku dayay.
Tuugo ku dhacday dabin la yaab leh oo ay qooleen booliiska Maraykanka
Booliis shan saacadood su'aalo waydiiyay Netanyahu
Madaxii Booliiska gobolka Minnesota oo iscasishay
Afahayeenka booliska wuxuu intaas ku daray "Xaafadaha ayaan galaynaa, amar waxaa loo haystaa in guri kasta oo la tuhmo la galo, qorigana laga soo saaro".
Muuqaalka ragga maanta lagu toogtay suuqa Baraakaha ayaa si weyn loogu baahiyay baraha bulshada, waxaana ka muuqanayay labo nin oo uu dhiig badan ka qubanayo, dhulka jiifa, dadkuna ku hareeraysanyihiin.
Muuqaalada oo ah kuwa aanan ku habboonayn baahin, ayaa waxaa sidoo kale laga arki karay ragga oo xarig lugaha looga xiray, islamarkaasna cabaadaya.
Qof u muuqda in uu yahay sargaal booliis ah ayaa mid ka mid wiilasha la dhaawacay weeydiinaya "Quruxdan ayaa alle kuu dhaliyee, maxaa kugu kalifay waxan?", kadibna wuxuu ku jawaabayaa "Waa la i qalday, niman iga waaweyn ayaa i qalday".
Ma cadda waxa uu sharciga ka qabo in jidka lagu maraanmaro, su'aalana lagu weeydiiyo dadka falalka burcadnimada ah lagu qabto, balse waxaa muuqanaysay in hanaanka booliiska u maamuleen aysan habboonayn sida ay sheegayaan dadka baraha bulshada aragtiyadooda ka dhiibanaya.
Dad aad u badan ayaa meesha isugu soo baxay oo sawiro iyo muuqaalo ka qaadanayay, iyada oo dhammaadka muuqaalka baraha bulshada lasoo dhigay la arkayay mid ka mid ah ragga la dhaawacay oo lasii saarayo Bajaaj, lugtiisa ay aad u burburtay, dhiig badana uu ka qubanayay.
Toddobaad ka hor , ciidanka amniga magaalada waxa ay gacanta ku dhigeen lacag doolar been abuur ah, iyaga oo markii dambe sheegay in ay heleen lacago dheeraad ah kadib dabo gal ay sameeyeen.